ATN: April 2008
တခါတခါ ကျနော် ပြန်စဉ်းစားကြည့်မိတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ ဆုံးရှံးမှုနဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကို။ သေချာတာက ကျနော်တို့တွေ အောင်မြင်ခဲ့တယ်၊ တချိန်တည်းမှာပဲ ကျနော်တို့ ဆုံးရှုံးခဲ့ကြတယ်။ ဘာတွေ အောင်မြင်လဲ၊ ဘာတွေဆုံးရှုံးလဲဆိုတာကတော့ .. အချိန်ကာလဆိုတဲ့ ပဉ္စလက်ဆရာရဲ့ ပြက္ခဒိန်ထဲမှာပဲ တွေ့နိုင်မယ်ထင်ရဲ့။
ဒီလိုနဲ့ ကိုယ်ကိုယ်ကို သူရဲကောင်းကြီးတွေလုပ်လို့၊
ဒါပေမယ့် အဲဒီအိပ်မက်ကြီးကို ကျနော့် သူငယ်ချင်း တယောက်က လှုပ်နှိုးခဲ့တယ်။ အဲတော့ သူ့ကိုကျေးဇူးတင်ရင်း သူ့ကဗျာကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
သူ့ကဗျာက ခေါင်းစဉ်ကိုတော့ ကျနော်က ပေးခဲ့ပါတယ်။
နုပျိုမူ နဲ့..ဒေါမာန်ဟုန် နိူး..
ကျောပိုးအိတ် ထဲ ထိုးထဲ့..
ခရီး ရှည် ထွက်ခဲ့ ကြ...
ခြင်္သေ့ ပျိုများ လို..
တော တောင် ကို ဟိန်း ..
ရွာ ကို သိမ်း ခဲ့ ကြ..
ရုံးကြွ နေ တဲ့ အချစ် ..
သင်တိုင်း ဖြူ တွေ နဲ့ ထွေး ရစ်..
ပလိုင်း တွေ မမောတမ်း ဆင့်လို့
တောပန်း တွေ ..ခူးခဲ့ကြ..
အေးမြတဲ့..ဘုရား ကျောင်း ရိပ်..
တိတ်ဆိတ် စွာ လက်ချင်း ဆုပ်..
ဒါပေမဲ့.. မျက်စိ စုံ မှိတ် လို့တော့..မရ နိုင် ကြ..
အိမ်မက် တွေကို..ပြစ် ချ ခဲ့ ရ..
ခြင်္သေ့ လည်ဆံ တွေ အသာဖွက်..
သိုးခြံ ထဲက..သိုးတွေ ထဲ..
သိုး ဆို လည်း သိုး ပါပဲ ..
ခပ် ရှုပ် ရှုပ်..တောက်ပ တဲ့ ..မြို့အ၀င်
အချိန် တွေကို သယ်ပိုး
ပျောက်ဆုံး ခြင်း တွေ ကို ရှာ ..ရှာ..ရှာ..
တေးသွား တွေကို.. စည်းချက် တွက်..
ကာရန် တွေ လည်း ..ကျိုးပဲ့ ခဲ့..
Burma Crisis အတွက် တွေးပူ..
ခန္ဓာ ကိုယ် ထဲက..Mid-life Crisis ကို သတိ မမူမိ..
အတိတ် တွေကို..ဖန်ခွက် ထဲ လောင်းထဲ့..
အတိတ် တွေ ကို..ကဗျာ တွေ ထဲ..ထဲ့ဖျော်
အတိတ် တွေ ကို.. စာ တလုံး ခြင်း ကုံး လို့..
အောင်သေ အောင်သား..စား ကြတယ်..
ဆံပင် ဖြူ ကို အသာသပ်..
အင်တာ( နတ် )ရေ ကန် ကြီး ထဲ..ဒိုင်ဗင် ထိုး
ဆုံးရှုံးခဲ့ တဲ့..မြို့ပြ နုပျိုခြင်း များ.. ပြန်ရ လေ မလား ..
သူတို့ ရင်ဘတ် ကြီး တွေ ကတော့..ဟောင်းလောင်းပွင့်လို့......
ဒီကဗျာကတော့ ကျနော့် အမကြီး မသဒ္ဓါက ကျနော့် အမေအတွက် အမှတ်တရ စပ်ပေးခဲ့တာပါ။ ကျနော့်ကိုလည်း ဒီနေ့ လာဖတ်ဖို့ ပြောထားတာပါ။ ကျနော်ကတော့ အလုပ်က ပြန်လာမှ သွားဖတ်ရတာပါ။ သွားဖတ်တော့ ည ၁ နာရီ ကျော်နေပါပြီ၊ အမကြီးကို ခွင့်တောင်းပြီး ပြန်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
အန်ကယ်ဦးလှရွှေ၏ဇနီး ကွယ်လွန်သူ အာဇာနည်မ အန်တီဒေါ်ခင်မာအေးကိုယ်စား ခံစားကြည့်ပေးပါသည်။ မှားရင် ခွင့်လွတ်ပါ မောင်လေးကိုအောင်သာငယ်ရေ.။ မငိုပါနဲ့ သား..သားမေမေ သားနဲ့အတု အမြဲရှိနေပါတယ်။
ဒီကဗျာကတော့ အဖေ့အတွက် အမေကိုယ်တိုင် ရေးခဲ့တဲ့ ကဗျာပါ။
နေမင်း ရာထောင်။ ပူလောင်သောက
ကြယ်စင်တစ်စ - မလက်ပခဲ့။
ပန်းငုံမရှိ။ ပန်းပွင့် မရှိ။
တုံဏှိဘာဝေ၊ ရှိုက်သံတွေနှင့် ----။
ဝေဒနာအကြည့် - တမြေ့မြေ့နှင့် ---။
(ခင်ပွန်း အထိမ်းသိမ်းခံရသော ၂၉-၆-၈၉ နေ့သို့)
ဒီကဗျာကတော့ သူ့နှစ်-၅၀-ပြည့်မှာ အမေ ရေးခဲ့တဲ့ ကဗျာပါ။
နှစ် -၅၀-များတောင် ပြည့်ခဲ့ပေါ့
မေ့မှာ စွဲကပ်လို့ နေခဲ့ပြီ၊
အခါးရောဂါ - ဝေဒနာကုသရေးမှာ
ပျောက်ပါ့မလား မောင် ---၊
``ချို``တဲ့ ရက်ကလေး ရောက်ချင်ပေါ့။ ။
ဧပြီ ၁၂၊ ၂၀၀၈
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွင် ထင်ရှားသူတစ်ဦးဖြစ်သော ဒေါ်ခင်မာအေးသည် ယမန်နေ့ညက ရန်ကုန်မြို့တွင် ကွယ်လွန်သွားသည်။ ဒေါ်ခင်မာအေးသည် ကွယ်လွန်ချိန်တွင် အသက် ၆၈ နှစ်ခန့်ရှိပြီဖြစ်သည်။ ဒေါ်ခင်မာအေးသည် ထင်ရှားသည့် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်း ဦးလှရွှေ၏ ဇနီးဖြစ်သည်။ ဒေါ်ခင်မာအေးကွယ်လွန်ချိန်တွင် ခင်ပွန်းသည် ဦးလှရွှေ၊ သားသမီးများဖြစ်သော ကိုဆက်အောင်နိုင်၊ ကိုဆက်အောင်ခိုင်၊ မနေခြည်တို့ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ ဒေါ်ခင်မာအေးအပါအ၀င် ၄င်း၏မိသားစုဝင်များသည် မြန်မာနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွင် တစိုက်မတ်မတ် ပါဝင်ခဲ့ကြသည်။ အကြိမ်ကြိမ်ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာ အကျဉ်းချခံခဲ့ရသူများဖြစ်သည်။
ဒီစာကို မိုးမခ စာမျက်နှာများက ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြပါတယ်။
ဒီကဗျာကတော့ ကျနော့် အဖေကိုယ်တိုင် ကျနော့် အမေအတွက် ရေးခဲ့တဲ့ ကဗျာပါ။ ခေါင်းစဉ်ကိုတော့ ``ခင်ဝိုင်း``လို့ သူက ဘာကြောင့်ပေးထားတာလည်းဆိုတာတော့ သူပဲ သိမှာပါ။
ဒီကဗျာကတော့ ကျနော့် အမေအတွက် ဦးလေး ဦးလှတင်အောင်ရဲ့သားအငယ် ကျနော့်ညီလေး ကိုဇင် (ဇင်ထွန်းအောင်) က ရေးပေးခဲ့တာပါ။
အရှိန်ပြင်းစွာ စီးဆင်းတဲ့ မြစ်။
ကျယ်လောင်စွာ အော်မြည်နိုင်တဲ့ မြစ်။
အရှည်ကြာဆုံးနေ့ လို့ ကျနော် ကဗျာတပုဒ် ရေးခဲ့ဖူးတယ်။ ကဗျာခေါင်းစဉ်ကို ပေးမိတာကလည်း အမေနဲ့ ကျနော် စကားပြောခွင့် ရခဲ့တဲ့အချိန်တွေတုန်းက အမေနဲ့ ကျနော် တွေ့ခွင့်ရမယ့်ရက်ကို မသိနိုင်တဲ့အကြောင်း အမေ့ကို ပြောမိရာက စခဲ့တာပါ။
အမေက ကျနော့်ကို ပြောပြတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးတုန်းက မဟာမိတ် စစ်တပ်တွေ ကမ်းတက် တိုက်မယ့်နေ့ကို ဖက်ဆစ် ဂျာမန်တွေက ကြောက်နေကြသတဲ့။ အဲဒီနေ့မှာ သူတို့ ရှုံးနိမ့်လိမ့်မယ်လို့လည်း သိနေကြသတဲ့။ အဲဒီနေ့ရောက်လာတော့မှာကိုလည်း သူတို့က သိပ်ကြောက်နေကြတယ်တဲ့။ သူတို့ မသိနိုင်တာကတော့ အဲဒီနေ့ဟာ ဘယ်နေ့လည်း ဆိုတာပဲတဲ့။ အဲဒီလိုမျိုး သူတို့ ကြောက်နေကြတဲ့နေ့ကို အရှည်ကြာဆုံးနေ့ (the longest day) လို့ သူတို့ခေါ်ကြသတဲ့။
ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်ကလည်း ဖက်ဆစ်တွေအောက် ရောက်နေခဲ့ရတာပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း စကားတခုပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ -ကျမတို့ဟာ ဖက်ဆစ်စနစ်နဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်-လို့၊ ဖက်ဆစ်ဂျာမန်တွေ ကြောက်ခဲ့တဲ့ အရှည်ကြာဆုံးနေ့ကို ဗမာပြည်က ဖက်ဆစ် စစ်အာဏာရှင်တွေကလည်း ကြောက်နေခဲ့ကြတာပါ။ အမေက ကျနော့်ကို ပြောပြတယ်- သားရဲ့ ဒီကောင်တွေကလည်း သူတို့ရဲ့ အရှည်ကြာဆုံးနေ့ကို ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ စောင့်နေကြတာ-တဲ့။
ကျနော်ကတော့ ကျနော့်ရဲ့ အရှည်ကြာဆုံးနေ့ကိုပဲ ရင်ခုန်ခဲ့တယ်။ - အမေနဲ့ ပြန်တွေ့ရမယ့်နေ့- အဲဒီနေ့က ကျနော့်အတွက် အရှည်ကြာဆုံးနေ့။ အမေ့အပြုံးကို ကျနော် စားသုံးချင်တဲ့နေ့။
ဒါပေမယ့် ကျနော့်ရဲ့ အရှည်ကြာဆုံးနေ့ကတော့ ဘယ်တော့မှ မရောက်လာတော့မယ့်နေ့ ဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ။
အနှစ် နှစ်ဆယ် အမေ စောင့်နေခဲ့တယ်။ ကျနော့် မျက်နှာကို ပြန်တွေ့ရဖို့၊
အနှစ် နှစ်ဆယ် ကျနော် စောင့်နေခဲ့တယ်၊ အမေ့အပြုံးကို ကျနော် စားသုံးချင်လို့၊
အမေရော ကျနော်ရော အဲဒီနေ့ကို မတွေ့ခဲ့ရတော့ဘူး။
အဲဒီ ရက်စက်တတ်တဲ့ အနှစ်နှစ်ဆယ်က ကျနော်တို့ သားအမိကို ခွဲခြားပစ်ခဲ့ပေါ့။
တခါက အမေက ကျနော့်ကို ပြောပြခဲ့ဖူးသေးတယ်။ -သားရဲ့ စာရေးဆရာမကြီးတယောက်က ငါးနှစ်ကျော် ခွဲခွာခဲ့ရတဲ့ သူ့သားနဲ့ ပြန်တွေ့ရတော့မယ်ဆိုတော့ သူ့ခံစားချက်ကို စာဖွဲ့ထားခဲ့ဖူးတာ အမေ ဖတ်ရတယ်။ ကျမရင်ထဲမှာ လိပ်ပြာ အကောင်တထောင် ပျံနေသလိုပဲ-တဲ့၊ မာမာ့အတွက်တော့ သားနဲ့ တွေ့ရမယ့် နေ့ဟာ မာမာ့ ရင်မှာ လိပ်ပြာ အကောင်တသိန်း ပျံနေမှာပဲ-တဲ့၊
အခုတော့ မပျံသန်းနိုင်တိုင်တော့တဲ့ အဲဒီ လိပ်ပြာ အကောင်တသိန်းကို သူ့ရင်ထဲမှာ သိမ်းသွားရင်း အမေ အိပ်စက်သွားခဲ့ပါပြီ။
ဗမာ့ အဘိဓါန်ထဲမှာ ရှိသမျှစကားလုံးတွေကို ယူသုံးဦး အမေ့ကို ဆုံးရှုံးရတဲ့ ကျနော့် ကြေကွဲမှုကို အဓိပ္ပါယ်မဖွင့် ဆိုနိုင်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ကျနော့် ကြေကွဲမှုတွေ၊ ဝေဒနာတွေကို မျှဝေခံစားရင်း ကျနော့်ကို စိတ်ဓါတ် ခွန်အားတွေ ပေးသွားခဲ့ကြတဲ့ ဘလော်ဂါ ညီအကိုမောင်နှမတွေ ရှိနေသေးတာ ကျနော် ဖြေသာပါတယ်။
အဲဒီအတွက် အဲဒီ ဘလော်ဂါ ညီအကိုမောင်နှမတွေကို အောက်မှာ မှတ်တမ်းပြုပေးလိုက်ပါတယ်။
(စီပုန်းထဲမှာ ခွန်အားပေးခဲ့သူတွေကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။) ဖုန်းခေါ်တဲ့- မေးလ်ပို့တဲ့- ညီအကို မောင်နှစ်မတွေကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
နံမယ်အရင်းနဲ့..သမိုင်းအရင်းကို ခုမှ သိရပါတယ်။
မိသားစုနဲ့ထပ်တူ ၀မ်းနည်းပါတယ် ဆိုတဲ့စကားထက် ပိုမဆိုနိုင်တော့ပါဘူး။
အမေ မတိုင်ခင်ကလည်း..အမေ့အမေတွေ..အမေ့အဖေတွေ ဖောက်နေကြတာပဲ.. ခေတ်နဲ့ ဦးတည်ချက်တွေသာ ကွာမှာပါ။ အမေလည်း.. ဖောက်ခဲ့တာပဲ။ အားလုံးလည်း ဆက်ဖောက်နေကြရမှာ ပါပဲ။ ပူပန်ခြင်း..၀မ်းနဲခြင်း..မျှော်လင့်ခြင်းတွေ ကင်းတဲ့နေရာ မှာ.. အမေ နားခိုနေပါစေ။ သူ တကယ်ကို ငြိမ်းချမ်းနေမှာပါ.။
အကိုရေ ခုလို အချိန်မျိုးမှာ ဒီလို သတင်း ဖတ်လိုက်ပြီး စိတ်မကောင်းလွန်းလို. မေငိုရပါတယ် အကိုရယ်။ မေ့အမေလဲ ကင်ဆာရောဂါကြောင့် မေ သိပ်မကြာခင် ဒီလို အဖြစ်ကြီးကို ကြုံတွေ.ရတော့မှာ အကိုရဲ့။ လက်နက်မချနဲ.လို. သားကို ပြောတဲ့ အကို.အမေရဲ့ သံမဏိစိတ်ဓာတ်ကို လေးစားလိုက်တာ။ ဒီလောက် တိုင်းပြည်အပေါ်ချစ်တဲ့၊ မယားကောင်း၊ အမေကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသားကောင်းပီသတဲ့ အမေ တစ်ယောက် ဆုံးရှုံးသွားရလို. စိတ်မကောင်း အင်မတန် ဖြစ်မိပါတယ်။ ပြီးတော့ သားတစ်ယောက်ရဲ့ ၀မ်းနည်းကြေကွဲမှုကို စာနာမိပါတယ်လို. ပြောပါရစေအကို။
အမှန်တရားကို မြတ်နိုးပြီး တော်လှန်ဝံ့တဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေကတော့ ဘယ်တော့မှ သေဆုံးမသွားဘူး။ အောင်မြင်မှုတွေ ခိုင်ခိုင်မာမာ ရရှိသည်အထိ ဆက်လက် တိုက်ပွဲဝင်နေကြဦးမယ်။ စိတ်ဓာတ်ချင်း တူညီကြရင် ညီအကို မောင်နှမကဲ့သို့ ...။ မိသားစုနဲ့ ထပ်တူ ခံစားမိပါတယ်။
အကိုရေ အမေက မသေပါဘူး ...
ချစ်ခြင်းတရားနဲ. ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်ပေါ် သစ္စာရှိ ပါတဲ. ......။
အခု ကျနော် ငိုမနေပါဘူး။
အစ်ကိုရေ ... ထပ်တူ ကြေကွဲ ၀မ်းနည်းရပါတယ်
စိတ်မကောင်းပါဘူးအစ်ကို။ မနေ့ညက ကိုလွမ်းဏီအိမ်မှာ အမေမာ ရက်လည်မှာကတည်းက အစ်ကို့ အမေ ဆုံးပြီဆိုတာကို ကြားရတယ်။ ကျနော်တို့လည်း ထပ်တူထပ်မျှ ၀မ်းနည်း ကြေကွဲရပါတယ်။
April 12, 2008 10:14 PM
အကို..အကို.စာတွေ ဖတ်တိုင်း မေလဲ ငိုရတယ်။ အသည်းမာအောင် ပြင်ဆင်ထားချင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရင်ဆိုင်ရတော့မှာကို သိရက်နဲ. သိပ်ကို ကြောက်နေမိတယ်။ သားတွေကို စိတ်ဒဏ်ရာ ရမှာစိုးတဲ့ အမေ့ စေတနာကို ခံစားမိပါတယ် အကိုရယ်။ သွားတွေ.ပြီးတောင် ကန်တော့ခွင့် မရတဲ့အတွက် အကိုနဲ.ထပ်တူ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ စိတ်သိပ်ထိခိုက်နေချိန်မှာ ကိုယ့်ကျန်းမာရေးကို ပိုဂရုစိုက်ပါတဲ့။ လမင်းကြီး မရှိတော့တဲ့ ကောင်းကင်ကြီးမှာ အကို.ကလေးလေးတွေအတွက် နေမင်းကြီးဘ၀ကို ရောက်နေတဲ့ အကိုက လင်းလက်တောက်ပနေမှ။ အကို. ကျန်းမာရေးကိုကော၊ အကို.အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေးကိုကော ပိုဂရုစိုက်ကြပြီး၊ ကောင်းကင်မှာ ကြယ်ပွင့်လေးတွေ ကြာကြာ တောက်ပနိုင်အောင် ဂရုစိုက်ပါလို. ပြောခဲ့ပါရစေနော်။
၀တ်ကျေ တန်းကျေ ၀င်ပြောသွားတာ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ ကျနော်က ခင်ဗျားလို အမေ့ထမိန်ကို ဘယ်တုန်းကမှ ဆွဲခွင့်ရခဲ့တဲ့ကောင် မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အမေကို ဆုံးရှုံးရတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်လို ခံစားရလဲ ဆိုတာကိုတော့ ကောင်းကောင်း သိခဲ့လို့ပါ။ အန်တီ့လို သမိုင်းတာဝန်တွေကို သူ တတ်နိုင်တာထက် ပိုထမ်းခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲဝင် မိန်းမတယောက်ကိုိ အမေ တော်ခွင့်ရခဲ့တာ ခင်ဗျား သိပ်ကံကောင်းပါတယ်ဗျာ။ သူ ကျနော်တို့ကြားမှာ အမြဲရှင်သန်နေမှာပါ။
ကိုအောင်သာငယ် အဖြစ်သာသိခဲ့ရာက အခုမှ နာမည်ရင်းနဲ့မိသားစုရဲ့ သမိုင်းကို သိရပါတယ်။
မိခင်တစ်ယောက်ဆုံးရှုံးမှုအတွက် အကိုတို့ မိသားစုနဲ့ထပ်ထူ ထပ်မျှ ၀မ်းနည်းကြေကွဲ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘ၀ဆိုတာ ဒီလိုပဲ ကိုယ်က စိန်ခေါ်ရဲမှ ဆိုတဲ့ အမေ့စကားကို အမြဲကြားယောင်ပြီး
၀မ်းနည်းတဲ့ကြားက ဂုဏ်ယူပါ အကို...
April 13, 2008 8:39 PM
ကျနော် မထင်တဲ့အချိန်မှာ -
အမေ ဆုံးပြီ။ အမေ ဆုံးသွားပြီ။
ဦးခေါင်းထဲမှာ ပဲ့တင်သံတွေ ---
တောင်ပြိုသံတွေ ကျနော် ကြားနေရတယ်။
ကျနော့် ကမ္ဘာကြီး ပြိုကျသွားပြီလား။
လမင်း မရှိတော့တဲ့ ကောင်းကင်ကြီးထဲ
ကျနော် ဘယ်လို လက်ပ ရပါ့မလဲ အမေရယ်။
ထောက်လှမ်းရေးတွေ အမေ့ကို လာခေါ်တုန်းက
အမေ့ထမိန်စကို အတင်း ဆွဲထားခွင့်
အမေ မသွားရဘူး-လို့ ကလေးအတွေးနဲ့။
အမေက ကျနော့် လက်ထဲက သူ့ထမိန်စကို
ဆတ်ကနဲ ရုတ်ပြီး ထောက်လှမ်းရေးတွေနောက် ပါသွားခဲ့ဖူးတယ်။
တချိန်မှာ - အဲလိုမျိုး ဘာလို့ ကျနော့်လက်ထဲက ထမိန်စကို
အမေ ဆတ်ကနဲ ရုတ်သွားတာလဲ-လို့
- သားတို့ စိတ်ဒဏ်ရာတွေ ရမှာ စိုးလို့-တဲ့ ဖြေတယ်။
အခု သေမင်းက လာခေါ်တော့
ကျနော် ဆွဲထားခွင့် မရလိုက်ဘူး။
ဟိုး အနှစ် လေးဆယ်ကျော်ကလိုမျိုး
ပြီးတော့ -သားတို့ စိတ်ဒဏ်ရာတွေ ရမှာစိုးလို့-လို့
ကိုယ်၊ စိတ်၊ နှလုံးသား
ငါ့ ရင်အုံကို လှုပ်နေတယ်၊
အဲဒီ ငှက်တွေရဲ့ အတောင်ပံတွေ
လွတ်လပ်ခြင်းကို ငါ့ နှလုံးသားထဲ ဖွက်ခဲ့တယ်။
ဘလော့မှာ သီချင်းတွေ တင်ရင်းနဲ့ သီချင်းတွေချည်းပဲ နားထောင်နိုင်တဲ့ ဘလော့လေးတခု လုပ်ဖို့ စိတ်ကူးရသွားတယ်။ ဒါနဲ့ သီချင်းမြေ ဆိုတဲ့ ဘလော့လေးတခုကို ဖန်တီးဖြစ်သွားတယ်။ သီချင်းတွေမျိုးစုံ အဲဒီမှာ နားထောင်နိုင်ပါတယ်။
tha-chin-myay.blogspot.com မှာ အဆိုတော် မျိုးစုံရဲ့ သီချင်းတွေကို တင်ထားပေးပါ့မယ်။ သွားရောက် ကြည့်ရှု ခံစားကြပါ။
အမေ လူထု ဒေါ်အမာကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရတော့ ကိုယ့် မိခင်ကိုယ်တိုင်ကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရသလိုပဲ မချိတင်ကဲ ခံစားရပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ကျနော်ချစ်တဲ့ ပန်းချီဆရာ၊ တေးရေးဆရာ၊ အဆိုတော် ခင်ဝမ်းရဲ့ အမေကို ကျနော်တို့အားလုံးရဲ့ကိုယ်စား အလွမ်းပြေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အမေရဲ့ ရင်ခွင်မှာ ငါတို့ ကြီးပျင်းခဲ့တယ်။
အမေရဲ့ နို့ရည်ကို သောက်စို့ခဲ့ပြီး
အမေရဲ့ ချိုတေးမှာ အိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်။
ငါတို့ အားလုံးရဲ့ အမေ
အမေရဲ့ အခြေအနေ မြင့်မားနေချိန်မှာ
ငါတို့တတွေ လောကကြီး တခုလုံးမှာ ပလွှားနိုင်ခဲ့တယ်
အမေရဲ့ အခြေအနေ ယိမ်းယိုင်နေချိန်မှာ
အမေကို စွန့်ခွာ ထွက်သွားကြလည်း
အမေရဲ့ သားများကို ခွင့်လွှတ်နိုင်ခဲ့တဲ့
လောကဓံကို ရင်းနှီး ကျေနပ်သူ......
ကျနော်တို့မှာ ညီအကို များစွာ ရှိတယ်။
အမေ နိမ့်ကျ နေချိန်မှာ ကျနော်တို့ စိတ်မပျက်ပါ။
လောကဓံကို ခံနိုင်တယ် အမေ့ရဲ့ သားတွေ ....
နိမ့်ကျလျက် အမြဲ မနေပါ.....
သာယာတဲ့ အခြေမှာ ပျော်ရွှင်နိုင်ကြဖို့...
ကနေ့ လုံ့လ စိုက်ရပါမယ်...
အမေရဲ့ ထာဝရ အချစ်ပါ အမေ .....
ကျနော်တို့အားလုံးချစ်ခင်လေးစားမြတ်နိုးရတဲ့ အမေ လူထု ဒေါ်အမာ ဒီနေ့ မနက် ဂ နာရီ ၃၇ မိနစ်မှာ မန္တလေး ဆေးရုံကြီးမှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါပြီ၊ စကားလုံးများနဲ့ ဖော်ပြလို့ မရနိုင်အောင် ၀မ်းနည်းကြေကွဲရပါတယ်။ အမေကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ။
လပြည့်ညမှာ အတောက်ပဆုံးကြယ်တစ်ပွင့်ကို လိုက်ရှာနေမိတာမျိုး
ကွန်ပြူတာမှာ ကစားရတဲ့ ဂိမ်းတစ်ခုလို အိုဗာ ဖြစ်သွားမှာတော့ မဟုတ်ဘူး
စာမေးပွဲတစ်ခုလို အချိန်အကန့်အသတ်လည်း မရှိဘူး
နောက်ကျမူတိုင်းမှာတော့ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေ ကိုယ်စီနဲ့။
တွက်မိတဲ့ ပုစ္ဆာအားလုံးမှာ အဖြေက တစ်ခုပဲထွက်တယ်။
သရီးဒီ ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ ကြည့်ရတဲ့ သည်းထိတ်ရင်ဖိုဟောလိဝုဒ် အက်ရှင်ဇာတ်ကားတွေလို
အက်ဆစ်မိုးတွေ ကွက်ကြားရွာချပေးနေတဲ့ ဟောဒီ မိုးကောင်းကင်အောက်မှာ
လူငယ်တွေရဲ့ ပစ္စုပ္ပန်နဲ့အနာဂတ်ဟာ မြူတွေလိုေ၀၀ါးနေမြဲ။
လူတိုင်း ကိုယ်ချင်းစာစိတ် ထားကြရင် ကောင်းမှာပဲ
မင့် နံရံကြီးက ထူပြစ်လွန်းလှတယ်။
ရှေးဟောင်း ကျောက်စာ တချပ်။
ဆန့်ကျင်ဖက် စကားလုံးတွေရှာတဲ့ ကျမ်းစာ။
ငါ တွေ့ခဲ့တယ် ...